UMfoweth 'Economic-to-Use i-MFC-J5620DW I-All-in-One Printer
Ukubuyekeza komkhiqizo Amajethi
by UWilliam Harrel
Iphrinta ye-wide-format ehlakaniphile, ehlelwe ibhizinisi ene-CPP enhle kakhulu kuleli klasi
Uma ujikeleze isigaba se-Printers & Scanners se-About.com nganoma isiphi isikhathi, akudingeki ufunde okuningi lapha ukwazi ukuthi ngilwa nokulwa okuhle ngokubhekana nezindleko zokusebenzisa amakhasi angaphezu kwekhasi ngalinye, noma izindleko eziphezulu ngekhasi ngalinye (i-CPP) yeyinki noma i-toner. Ngamanye amazwi, uma umenzi wephrinta ethi umshini "umthamo ophezulu," ohambisana nalowo mbuzo ukuqonda ukuthi ukugcina iphrinta enikezwe ngeyinki ngeke kukuyise endlini empofu.
Sonke siyazi ukuthi abenzi bephrinta benza inqwaba yemali yabo ekuthengiseni izidakamizwa. Kodwa-ke, kuphephile ukucabanga ukuthi nakuba iningi lethu lizwa ukuthi, yebo, abakhiqizi bephrinta bafanelwe ukuthola inzuzo, ubukhulu bezinzuzo ezinjalo kufanele kube nengqondo. Futhi yilokho okukhulunywa ngakho ngokubuyekezwa kwanamuhla, uhlu lwe-$ 199.99 lwe-MFC-J5620DW loMfowethu-olugcwele olugcwele yonke iphrinta ye-inkjet inkjet ene-CPP enamandla-ikakhulukazi kumshini ongaphansi kwe- $ 200.
Umklamo & amp; Izici
Ngaphandle kokungabizi kakhulu ukusebenzisa, okuzoxoxa ngakho ngomzuzwana, i-MFC-J5620DW ilayishwe umkhiqizo kanye nezici ezisebenzayo-ngokuphawulekayo ukuthi ikhono layo lokuphrinta kumakhasi angaphezu kwamathebhu, noma ama-intshi angu-11x17, usayizi wephepha. Kodwa-ke, ngokungafani namanye amamodeli amafomethi amaningi , njenge- HP's $ 249.99 HP Printer Wide Format E-All-in-One noma i-$ 299.99-uhlu lwe-MFC-J6920DW , lo msebenzisi akakwazi ukuskena, ukukopisha, kanye namakhasi wesayizi we-fax .
Njengoba kwenza ubukhulu obujwayelekile (incwadi, noma 8.5x11) ama-AIO, isithwebuli lapha sisekela amakhasi kuze kube semthethweni, noma amasentimitha angu-8.5x14. I-feeder automation documenter (ADF) isekela amakhasi angama-35 ngesikhathi, kepha ngeshwa, i -ADF yokuzibamba ngokuzenzakalelayo , okusho ukuthi ayikwazi ukucubungula okuvela emaceleni amabili, okuyi-multipage ngaphandle kokungenelela komsebenzisi.
Izinketho zokuxhumana zihlanganisa i-Wi-Fi, i-Ethernet, noma uxhumano oluqondile kwi-PC eyodwa nge-USB; Kodwa-ke, ezinye izici zephrinta, njengokuxhumeka kumasayithi wefu nezinye izinsiza kwi-Inthanethi, ngeke zisebenze uma zixhuma ngokuqondile ne-USB. Lezi, nezinye izici eziningi ze- PC , ezifana noMfoweth 'Web Connect, okuvumela ukuthi uxhume iphrinta kumasevisi athandwayo, njenge-Evernote, i-Google Drayivu, i-Flickr, i-Dropbox, Ibhokisi, ne-Facebook.
Iphaneli yokulawula ihanjiswe ngombala we-LCD wombala weskrini wesikrini esingu-3.7-intshi. Ngaphezu kokuyisebenzisa ukuze kube lula ukucushwa, ungasebenzisa iphaneli yokulawula ukuze uqale ukunyathelisa kusuka ekuskena ukuskena kumakhodi wekumemori ye-USB, noma amakhamera adijithali ahambisana ne-PictBridge namanye amadivaysi ahambisana ne-PictBridge. Ngaphezu kwalokhu kusebenza kwe-PC, ungaphrinta kusuka futhi uskena kwi-smartphone yakho, ithebhulethi, ne-laptop.
Okokugcina, i-MFC-J5620DW isekela izinhlobo eziningi zokunyathelisa, ezifana ne-Apple's AirPrint, i-Google Cloud Print, uhlelo lokusebenza lamahhala lwe-Brother iPrint & Scan, i-Wi-Fi Direct, ne-Cortado Workplace. Uma ungajwayele izici zokunyathelisa zakamuva, hlola lokhu nge-About.com " Izici Zokunyathelisa Imfono - 2014 " ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Ukusebenza, Ukuphatha Iphepha, Nekhwalithi Yokuphrinta
Njenge-MFC-J4610DW ngaphambi kwalo, i-MFC-J5620DW ingomunye wemishini embalwa kakhulu esiyibonile lelo phepha lokudla ngokubanzi, noma indawo, ukuma, kunokuba ubude bendabuko, noma i-portrait. Ngesikhathi uMfowethu ethi lokhu kwenza kube nokusebenza okunyathelisiwe nokunyathelisa iphepha, kuze kube manje, ngalokhu kanye ne-MFC-J4610DW, ngiye ngabona ukuvinjelwa okunciphisa kancane, iMFC-J5620DW ngokuvamile iwela ikhasi noma amabili ngemuva kwekhasi- ukushisa ngomzuzu ngamunye, uma kuqhathaniswa namanye ama-AIO anenani eliphansi.
Kodwa lokho akusho ukuthi i-MFC-J5620DW isuke ihamba kancane-hhayi neze. Ngokuphathelene nokuphathwa kwephepha, le AIO ihamba ne-draper 250-sheet yangaphambili futhi i-tray override ithrekhi engama-80 ngemuva. I-drawer enkulu ingalungiselelwa ukubamba amakhasi kuze kufike ku-11x17 amasentimitha, noma ungadla amakhasi angama-tile ayisihlanu ngesikhathi esisodwa nge-ithrekhi engaphezulu.
Njengalabo abaningi abafowethu abaprinta engibonile, lokhu kuprinta kahle, kungabi namaphutha amakhulu noma ukungaphumeleli. Noma kunjalo, okuhlangenwe nakho kwami ​​ukuthi uma kuziwa ezithombeni ezihlanganisiwe nezinhlobo ezithile zegrafu, ikhwalithi yomkhiqizo weMfoweth 'amaprinta iwela ngemuva kwamanye amaprinta e-HP ne-Epson, ikakhulukazi lawa maphrinta wezithombe. (Alas, lokho kuqala enye indaba ...) Kodwa futhi, lokho akusho ukuthi okukhiphayo kwakungenakusetshenziswa-kude nayo. Imane imishini ethile iphrinta izinhlobo ezithile zehluzo ezingcono kunalena. Ngakolunye uhlangothi, uma ushicilela izithombe kwiphepha lesithombe se-premium kulo mshini, okukhiphayo kubonakala kuhle kakhulu.
Indlela eya kuMfoweth '! Ake ngiqale ngezindaba ezinhle, lezindleko eziphansi kakhulu ze-AIO ekhasini ngalinye . Uma usebenzisa amathangi e-inkinobho okuthiwa yi-"XXL" ngephrinta, amakhasi amnyama namhlophe azosebenza ngaphansi kwama-2-cents amakhasi ngamunye nombala angaphansi kwamasenti angu-7. Akuzona nje kuphela lezi CPP ezinkulu ngokujwayelekile (okunye okufana nento ongayithola kumshini we $ 300 noma $ 400), kodwa konke-kodwa okungazwakalayo kwephrinta engaphansi kwe- $ 200-i-AIO enkulu-format kuleyo.
Ukuze uthole incazelo eningiliziwe yokuthi ukukhetha iphrinta engalungile kungakubiza kanjani inzuzo encane, hlola lokhu nge-About.com " Uma i-Printer engu-$ 150 ingakubiza izinkulungwane ".
Ngokwethembeka, lena yiphrinta yamathuluzi yokuqala engiyibonile ngama-CPP noma yikuphi eduze nalokhu okuphansi. Uma udinga iphrinta yezinhlamvu bese uhlela ukuphrinta okuningi, faka uMfoweth 'uMFC-J5620DW eduze naphezulu ohlwini lwakho lokuthenga.
Chofoza lapha ukuze uthole ukubuyekezwa okuningiliziwe kwe-MFC-J5620DW.
I-Canon Pixma MG5320
Isibuyekezo: Iphrinta ye-OfficeJet 4650 ye-OfficeJet 4650
Ukubuyekezwa: I-Mouse Road ye-Road Door Media's Road Mice engenayo i-Wireless Mouse
I-Dell's Fast and inexpensive-D-use-Dynamic Smart S5830dn
I-LBP151dw ye-Monochrome Laser Printer
I-LaserJet Pro M402dw i-LaserJet Pro Laser ye-HP
I-Epson WorkForce Pro WF-6530 Yonke iphrinta iphrinta
Ukuphelela kwe-Epson V39 Color Scanner
Indlela Yokubhalisela Uhlelo lwe-iOS lomphakathi lwe-Beta
I-MSKeyViewer Plus v2.5.0
I-CBR: Incazelo Yezingqikithi Zomthamo Oqhubekayo
5 Izibonelo ze-Biomimetic Technology
Imidlalo engu-17 engcono kakhulu ye-Wii
Kungani Wonke Umsebenzisi we-Tumblr Kufanele Alande isandiso se-XKit
Indlela Yokusebenzisa Izintandokazi Nge-Mac Maps App
Yikuphi uhlobo lweModem ye-Broadband Engcono - Ethernet noma i-USB?
Yini i-Roku Is & Ukuyisebenzisa Kanjani
Setha up bese ubheka i-iPhone ID yezokwelapha
Yeka ukuthi i-Smart Airbags igcina kanjani ukuphila
Kuyini ukuhlasela kweDDoS?
I-Samsung UN65JS9500 Ukubuyekezwa kwe-HDR ye-4K ye-4K
Indlela Yokulungisa Izithombe ezingaphenduliwe ku-Photoshop CC 2015
Thola i-Sine, i-Cosine, ne-Tangent kuma-Google Spreadsheets
Dala iwebhusayithi ngezingane zakho ngezinyathelo ezingu-8
I-Linux / Unix Command: i-sshd
Hlela izinhlelo zevidiyo ze-iMovie
Imidwebo Yemibala Ethuguqukayo ne-Hex ne-RGB Amakhodi aphansi
Kuyini i-Microsoft Paint 3D?
Izinkombandlela Zokuhlelwa Kwezokuhweba Ne-Mission